Ranomasina sy coves any Mijas | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Malaga, tora-pasika
Raha iray amin'ireo olona tianao ny fahavaratra ianao hankafy ny torapasika, ity lahatsoratra ity dia hahaliana anao. Betsaka ny torapasika eto amin'ny firenentsika sy manerantany. ary koa coves tsara tarehy, fa anio dia te hiresaka aminao momba ireo izay ao Mijas manokana aho. Tena tsy zava-dehibe fotsiny ny fahafantarana ireo lava-bato sy morontsiraka amin'ny fahavaratra, ririnina na amin'ny fotoana hafa amin'ny taona, tsara ihany koa ny mitsidika azy ireo na mitsangatsangana mba hankafizanao ny natiora.
Fa raha liana mitsidika Mijas ianao ary hahafantatra hoe iza ny moron-dranomasiny sy ny zorony tsara indrindra, dia mamakia hatrany satria ho hitanao ny zorony amin'ity tanàna ity, dia hahita anao izy ireo. Ary tsy ilaina ny mandeha mankany amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao mba hankafizanao ny toerana mahafinaritra, Espaniôla koa dia manana hatsarana be dia be ary hasehon'i Mujas aminao izany.
1 Mijas: toerana fizahan-tany mahafinaritra
4 Morontsiraka El Bombo
8 Morontsiraka bebe kokoa izay tsy azonao adino
Mijas: toerana fizahan-tany mahafinaritra
Nanomboka tamin'ny taona vitsy lasa ka hatramin'izao dia afaka milaza isika fa lasa iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana manan-danja indrindra ao Andalusia i Mijas. Tsy misy Andalosiana tsy mahalala izay misy an'i Mijas, ary misy aza ny olona maro izay avy any ivelany mankafy ny torapasika, ny lava-bolany, ny entona entiny ary ny fitsaboana tsara ataon'ny olona.
Mijas dia tsy latsaky ny 12 kilometatra morontsiraka ary feno coves sy morontsiraka ho an'ny tsiro rehetra, Ka azoko antoka fa ho hitanao ny zorony tonga lafatra ho anao, na inona na inona tianao sy tianao manokana. Saika ny morontsirak'i Mijas dia manana serivisy fototra handaniana andro tsy ampoizina miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana.
Raha mieritreritra ny hankafy fialan-tsasatra tsara tarehy any Costa del Sol ianao, dia tsy tokony tsy hohadinoinao ny fotoana hankanesanao any Mijas sy hahafahanao mankafy izay rehetra andrasanao miandry anao. Aza adino ambany ny sasany amin'ireo lava-bato sy torapasika malaza indrindra mba hahafahanao manao làlana tsara sy mankafy.
La Cala de Mijas no malaza indrindra amin'ny rehetra ary eo an-tanàna no misy azy. Manodidina azy dia misy bara sy trano fisakafoanana marobe satria toerana mpizaha tany izy io ary feno olona foana, manao azy io ho an'ny orinasa. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny morontsiraka amin'ity faritra ity dia omena ny Sainam-Pirenena Vondron'ny Vondrom-piarahamonina eropeana mba hahafahanao mahita ny hatsaran'ny toerana sy ny toetran'ny fasika sy ny rano ao aminy.
Any Calahonda no misy ity morontsiraka ity, torapasika tsy mitovy amin'ny hafa rehetra. Manana fasika mainty izy io ary izay no mahasarika ny sainao indrindra. SAINGY Morontsiraka mahafinaritra ny mandany ny andro miaraka amin'ny fianakaviana, namana na irery. Izy io koa dia manana saina manga noho ny serivisy marobe azo atao hanatontosa ny andronao eny amoron-dranomasina ary tsy manadino na inona na inona ianao.
Morontsiraka El Bombo
Ao amin'ny Cala de Mijas dia afaka mahita ny El Bombo Beach ianao, morontsiraka malaza na dia tsy dia fantatry ny hafa aza. Misy trano fisakafoanana efatra any akaikin'ny moron-dranomasina ary raha manadino ny lamba famaohana na ny seza misy anao ianao dia afaka mahita azy ireo any amin'izay ahafahanao manofa ny elo na seza tokana tianao. Fomba iray tsy fananana mitondra lounger sy elo avy any an-trano izany. Na dia amin'ny vanim-potoana lehibe aza dia atahoranao fa rehefa tonga ianao dia nalaina daholo ny zava-drehetra ary tsy maintsy mody ianao haka azy na mankany amin'ny magazay ary mividy izay ilainao amin'ny moron-dranomasina.
Izy io dia morontsiraka izay ahitanao trano fanofana maro ahafahanao mijanona. Hevitra tsara ny mandany ny fahavaratra eny amoron-dranomasina ary manana ny torapasika akaiky ihany koa isan'andro. Eny tokoa, Mamandraha mialoha satria feno feno ny vanin-taona ny trano, ary mety ho lafo be ny vidiny.
Ny morontsiraka El Almirante dia hita ihany koa ao Calahonda ary morontsiraka fasika maizina koa io. Morontsiraka ity hankafizanao ny rivotra madio, ny ranomasina ary ny fomba fijery tsara. Tsy isalasalana fa ho toerana ahafahanao miala sasatra sy hiala sasatra io. Hanana serivisy koa ianao mba hahatonga ny andronao ho lavorary.
Ity morontsiraka ity dia tena mitovy amin'ny teo aloha eo amin'ny lafiny serivisy ary malaza eo amin'ny olona izay monina ao amin'ity tanàna ity. Noho io antony io, raha te-hanatratra izany ianao dia tsy hanana olana.
Morontsiraka bebe kokoa izay tsy azonao adino
Ireto no nolazaiko anao etsy ambony: ny morontsiraka izay tsy azonao adinoina ao Mijas, fa raha te-hitsidika tsara ireo lava-bato sy morontsirak'i Mijas ianao dia aza hadino ity lisitra manaraka ity hanampiana azy io amin'ny làlan-kalehanao ary ankafizo ny morontsiraka iray manontolo. Aza very tsipiriany!
Beach of the Riviera. Io no morontsiraka lava indrindra amin'ny moron'ny Mijas iray manontolo.
Morontsiraka Cabo Rocoso. Somary tery izy io nefa mety tsara ny ankafizin'ny namana.
Morontsiraka Las Doradas any Cala de Mijas
Playa del Chaparral, izay misy eo anelanelan'ny Cala de Mijas sy El Faro.
Ny morontsiraka rehetra nolazaiko tamin'ity lahatsoratra ity dia mety tsara hankafizinao amin'ny fianakavianao, ny namanao na raha te-handeha irery ianao hankafy andro iray eny amoron-dranomasina. Saingy ny morontsiraka rehetra dia manana serivisy tsara, malalaka sy mora azo izy ireo ka tsy hanana olana amin'ny fidirana amin'ny ankabeazan'izy ireo amin'ny fiaranao ianao. Efa fantatrao ve hoe iza amin'izy ireo no tadiavinao hankafizanao ny fahavaratra anao na hahafantarana azy ireo fotsiny sy hahitany ny hatsaran-tarehiny rehetra? Azo antoka fa ho raiki-pitia amin'ny tsirairay amin'izy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ranomasina sy coves any Mijas